musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Russia inoda yayo Las Vegas muSochi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sochi Casino uye Resort chivakwa muKrasnaya Polyana kubheja nzvimbo, Sochi, Russia
Krasnaya Polyana yeRussia kubhejera nzvimbo ichagadziriswa kukwikwidza makuru makuru epasi rese ekuvaraidza nzvimbo.
Russian Krasnaya Polyana resort yekujairana neLas Vegas bhizinesi modhi muna2026.
Vagadziri vanoronga kugadzirisazve nzvimbo yekutarisisa kuti vatarise mabhenefiti ayo makuru pane masevhisi pane kubhejera.
Krasnaya Polyana kubhejera nzvimbo parizvino inomiririrwa nenzvimbo nhatu dzekubhejera.
Krasnaya Polyana inzvimbo inozivikanwa yekutsvedza uye kuchando pachando muRussia guta re Sochi ine mukurumbira wekuve anonyanya "kuremekedzwa" muRussia. Iyo inozivikanwa zvakare nenzvimbo yayo yekubhejera iyo yakagadzirwa muna Nyamavhuvhu 2016.
Krasnaya Polyana kubhejera nzvimbo parizvino inomiririrwa nenzvimbo nhatu dzekubhejera: Sochi Casino, Bonus slot muchina horo, uye Boomerang Casino. Nzvimbo yekubhejera inosanganisirawo yemitambo, iyo Bonus Hotel, maresitorendi akati wandei, uye iyo Wow Arena yemitambo nenzvimbo yevaraidzo.
Parizvino, zvivakwa zveKrasnaya Polyana resort iri kuvandudzwa uye kuwedzerwa kuchinjanisa neiyo Las Vegas bhizinesi modhi muna 2026.
“Zvirongwa zvine hungwaru zviri kubata zvivakwa zvemazuva ano panzvimbo yekutandarira. Mumakore mashanu anotevera, isu tichawedzera nekugadzirisa zvivakwa zveKrasnaya Polyana kubheja nzvimbo kune bhizinesi modhi yevaraidzo muLas Vegas, "Dmitry Anfinogenov, mukuru webasa rekuvandudza chirongwa, akadaro.
Vagadziri vacho vanoronga kutanga nekuwedzera iyo iripo Boomerang Casino, kumisikidza horo nyowani yemuchina uye kuronga kusununguka kwemahara kuBrunello premium restaurant. Kuvhura kukuru kweresitorendi nyowani kuRosa Khutor resort kuri zvakare pane chirongwa che2021-22.
Zvakare, basa rekugadzirisa paBonus Hotel parizvino ririkuenderera, nemamwe makamuri kuwedzerwa mumwedzi inotevera. Iyo Wow Arena yemitambo uye yevaraidzo nzvimbo inofanirwa zvakare kugadziridzwa mukudonha, nepo nyowani yemitambo yakatovhurwa padhoro repiri reSochi Casino.
Vagadziri vanoronga kugadzirisazve nzvimbo yekutarisisa kuti vatarise mabhenefiti ayo makuru pane masevhisi pane kubhejera. Nekudaro, ivo vanotaura kuti nzvimbo yekubhejera ichagadziridzwa kukwikwidza makuru makuru epasi rese ekuvaraidza nzvimbo.
Kubva kuvhura muna 2016, iyo Krasnaya Polyana kubheja nzvimbo mu Sochi yakashanyirwa nevanhu vanopfuura mamirioni maviri kubva munyika gumi nemashanu. Muna 2, Kasino Sochi akahwina mubairo weMoscow hupenyu & bhizinesi seyakanakisa chirongwa cheRussia chevaraidzo.